विकासका काम पक्षपातपूर्ण ढंगले गरिएको छ –के.स.भण्डारी
प्रकाश अधिकारी ÷सेतीमादी
बन्दीपुर, १३ असोज । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले सरकारले विकास निर्माणमा पक्षपातपूर्ण ढंगले अघि बढाएको बताएका छन् । उक्त कुरा केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले तनहुँको बन्दीपुरमा मंगलबार आयोजन गरिएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै बताएका हुन् ।
‘उपभोक्ता समितिलाई पैसा बाढ्ने , नेकपाका मान्छेलाई समितिलाई चयन गर्ने र अरुलाई सामेल नगराउने गरिएको छ के.स. भण्डारीले भने, प्राविधिकहरु पनि आफ्नो अनुकलका खटाउने गरिएको छ’ यो भन्दा पक्षपात अरु के हुन सक्छ । काँग्रेसबाट निर्वाचित क्षेत्रमा वजेट कटौती गर्ने गरेको समेत आरोप लगाउँदै भण्डारीले विकासमा देश व्यापी रुपमा पक्षपात पूर्ण ढंगले भईरहेको बताए । ‘काँग्रेसका प्रतिनिधीले जितेको कारणले छुट्टाईएका बजेटमा पनि काटिएको छ’ भण्डारीले भने ।
काँग्रेसको सरकारको पालामा नै विकासको अभियान चलाईएको भण्डारीको भनाई थियो । बाटो, विजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विकासका पूर्वाधारहरु गाउँ÷ गाउँमा काँग्रेसले नै पुर्याएको उनले बताए । ‘४६ साल पहिले कतिवटा बाटा थिए, कति गाउँमा विजुली पुगेको, स्कुल कति थिए , स्वास्थ्य चौकी कति थिए अहिले कति छन् ? त्यो सबै काँग्रेसको देन हो ’ भण्डारीले भने । बलियो सरकार भए पनि विकास नारामै सिमिति भएको उनले बताए ।
गरीव, सुकुम्बासी, दलित, शोषित, पीडित उत्पीडितलाई न्याय गर्छौ भन्दै ओरोलियो जनताले भोट दिए तर अहिले जनता भोकभोकै सडकमा हिड्नु परेको छ’ । वाईडबडी, गोकुल वास्कोटा काण्ड, सुन काण्ड लगायतबाट अरबौं भष्ट्राचार भएको प्रशासनिक र संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप भएको वाह्य सम्बन्ध विग्रिएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले काँग्रेस सडकमा उपस्थित हुनु पर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सा¥है भयो , कार्यकर्तामा निराशा भयो विरोध सभा गर्नु प¥यो भन्ने आवाज आईरहेको छ कोभिडले प्रभावित भएकोले रोकिएको हो ’ भण्डारीले भने ।
कार्यक्रम नेपाली काँग्रेस बन्दीपुरका सभापति कर्णबहादुर खत्रीको सभापतित्वमा भएको थियो । कार्यक्रममा काँग्रेस तनहुँका कार्यबाहक अध्यक्ष जीतप्रकाश आले, जिल्ला नेताहरु समुन्द्र गोदार, आनन्दराज त्रिपाठी, लक्ष्मीभक्त आचार्य, सुकुमलाला गुरुङ, प्रेम बानिया, इन्कन खनाल लगायतका वक्ताहरुले पार्टीलाई बलियो बनाउन गुटउपगुटमा नलागीन एक जुट भएर संगठित र क्रियाशिल बन्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रम छ जनाले नेकपा त्यागेर नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । नवप्रवेशीलाई के.स भण्डारीले स्वागत गरेका थिए ।
विभिन्न श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी
यसैबीच केन्द्रीय सदस्य भण्डारी, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य धुव्र वाग्ले , जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली लगायतले पार्टीको भानु नगरपालिका–४ वडा सदस्य दौलतबहादुर रानाभाटको १३ दिनको पुण्यतिथीमा पुगेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए । यस्तै दानबहादुर खड्काको माता वसुन्धरा खड्काको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा पनि के.स. भण्डारी लगायतका नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
Seimadidaily (सेतीमादी) September 29, 2020
Previous Previous post: सन्तोष लामाको आवजमा सागर उदासको ‘जम्काभेट’ बजारमा
Next Next post: मध्यनेपाल नगरपालिकामा ४ किलोमिटर सडक पीच हुँदै